Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba Zokuhamba Eswatini » Oko iNgxelo yeNkulumbuso yase-Eswatini ingayihoyanga
Iindaba zeBhodi yoKhenketho yaseAfrika • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba Zokuhamba Eswatini • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • Abantu benza iindaba • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo
Oko iNgxelo yeNkulumbuso yase-Eswatini ingayihoyanga
Themba Nhlanganiso Masuku, Ibambela leNkulumbuso Eswastini
Ukuzola kubuyisiwe kubukumkani base-Afrika base-Eswatini. Oku kuzola kudibana nenkcaso. Kuya kuthatha umsebenzi omninzi ukuzisa amaqela abemi kunye noorhulumente kwiphepha elinye, kodwa inkqubela phambili ethile yenziwe.
Inkulumbuso ebambeleyo yoBukumkani base-Eswatini yathetha nabemi ukuphendula intlanganiso ye-SADC Troika ngoJulayi 4
Uluhlu lwezinto ezinabemi aluzange lubhekiswe kwingxelo ye-Nkulumbuso kodwa kukuvula okokuqala kwengxoxo ebifuneka ngokungxamisekileyo phakathi kwamaqela abemi kunye noRhulumente wase-Eswatini
Inkulumbuso ilumkisa ngolunye usongelo e-Eswatini: COVID-19
UMbutho woPhuhliso lwamaZantsi e-Afrika waya eBukumkanini base-Eswatini ukuzisa urhulumente kunye namaqela abemi babucala ukuze avumele ingxoxo ephucukileyo yokusombulula iiyantlukwano kunye nozinzo kweli lizwe.
Ngokuvuselela ukuzola kwezomkhosi kwabuyiselwa, kwaye abasebenzi bakarhulumente baya kubuyela emsebenzini ukuqala ngoLwesibini. Inkulumbuso ebambe intetho yabantu ikhuthaza wonke umntu ukuba abuyele emsebenzini kwaye azi ngesisongelo se-COVID-19.
The Urhulumente wase-Eswatini uxelele i-SADC timipu yentsimbi evela eMzantsi Afrika isetyenziselwa ukubulala abemi bayo. Imipu, urhulumente wathi, yayivela kwi-EFF eMzantsi Afrika kwaye yanikwa umbutho ongudade wabo, i-EFF yaseSwazini.
I-Economic Freedom Fighters (i-EEF) Liphiko lase-Mzantsi Afrika elisekhohlo ukuya kwiqela lezopolitiko lase-pan-Africanist. Yasekwa ngowayesakuba nguMongameli woMbutho woLutsha we-African National Congress owayegxothiwe uJulius Malema, kunye namahlakani akhe, kwi2013.
Ngokwababini abazimeleyo eTurboNews Imithombo, abavukeli ababenxibe iyunifomu yamajoni ase-Eswatini babonwa bejongana nabathathi-nxaxheba base-Eswatini okukhokelela kumonakalo, ukwenzakala kunye nokufa.
Amatshantliziyo kunye nabemi bathi urhulumente unqumamise ukuhanjiswa kwezikhalazo ezicela ukuba kwenziwe idemokhrasi, ngakumbi kunyulo lwenkulumbuso engatyunjwanga ngukumkani.
Kudliwanondlebe no-Audrey Brown we-BBC Gxila kwiAfrikaUSikhanyiso Dlamini, oyintombi yokumkani kunye nomphathiswa wolwazi kunye nobuchwephesha, uthe ukuhanjiswa kwezikhalazo kuyekisiwe ngenxa yeliza lesithathu le-Covid-19 kwaye kwangeniswa inkqubo yokungenisa. "Ndithi amagorha angaphandle ahlasele ubukumkani, aqeshwe ngaba bantu [abo bafuna inguqu yedemokhrasi] ngezi zi-ajenda ... ngeyunifomu yamapolisa kunye neyunifomu yomkhosi, ukungena kubemi kunye nokuthumela iividiyo zabo behlasela abemi abamsulwa. Umyalelo wokudutyulwa kubulawe wawungaveli kukumkani ukuba wawukho lo myalelo. ”
Okwangoku, izithuba zosasazo zasekuhlaleni kunye namanqaku kwiindaba zeSwaziland abonisa ngokungaphaya izithuba ngu-Eswatini Abemi bafuna utshintsho lwentando yesininzi.
NgeCawa nge-4 kaJulayi 2021, zimbini Iintatheli zesakhelo esitsha, UMndebele oqaqambileyo uMndebele noCebelihle Mbuyisa, ababethunyelwe eSwatini bagcinwa, babethwa kwaye bangcungcuthekiswa yimikhosi yezokhuseleko, ngokwengxelo ye-tweets.
Iintatheli zeSakhelo esitsha zaziseSwatini ukunika ingxelo ngoqhanqalazo olwaluxhasa idemokhrasi kugxilwe ikakhulu ekubulaweni kukarhulumente ngabemi. Ngoxa babekwelo lizwe, babemiswa kwiindawo ekuvaliwe kuzo kangangezihlandlo, besongelwa, yaye benyanzelwa ukuba bacime nantoni na kwiifowuni nakwiikhamera zabo.
A Uluhlu lwama-20 ngabachaphazelekayo ababaluleke kakhulu, imibutho, amaziko abucala e-Eswatini, anxulumene negqiza le-SADC kuRhulumente khange athethwe kwintetho yenkulumbuso ebambeleyo kwangoko namhlanje, nge-5 kaJulayi.
Kwakungekho lizwi lithe ngqo okwangoku yiNtloko kaRhulumente, uKumkani wase-Eswatini, Mswati III.
Le yintetho ye-Nkulumbuso ebambeleyo kuRhulumente wase-Eswatini
Isigqibo sethu xa sisonke njengeSizwe kukungaze silibale iinjongo ezijingayo zokuphucula ubomi bazo zonke ii-emaSwati kwaye zihlala zingashukumi kwaye zingaphazanyiswa.
Ngaphandle kweziganeko zeveki ephelileyo ebeziphawulwe ngogonyamelo, ukutshiswa, nokuphangwa kwezinto ngendlela engazange ibonwe, simi simanyene kwikhwelo lethu loxolo nozinzo.
Besonwabile izolo ukufumana icandelo le-SADC Troika ebelikwiphulo lokukhangela inyani kwisimemo sethu. Eli phulo lokufumanisa inyani le-SADC liza kuqhubeka ngexesha elifanelekileyo njengoko sabelana ngeenjongo ezifanayo zengingqi zokuqinisekisa uxolo nozinzo kummandla wethu. Ndiyabongoza kwiSizwe ukuba sihlale sizolile kwaye sinyamezele ngelixa inkqubo iqhubeka.
Njengabemi beli lizwe kunye nale ngingqi, sonke sabelana ngoxanduva lokuba singaze sihlanganyele kuwo nawuphi na umsebenzi ophikisayo amanyathelo esiwenzileyo ukuphucula ubomi babantu, akukhathalisekanga ukuba izimvo zethu zahluke njani na ngalo naliphi na ixesha.
Umonakalo ongamkelekanga kuRhulumente nakwipropathi yabucala eyenziwe ngabaphangi ngoku sele ikwibhiliyoni ze-Emalangeni, nto leyo ibangele ukubuyela umva okukhulu kuhlumo lwentlalo noqoqosho lwelizwe nozinzo. Uqikelelo lwangoku lubonisa ukuba iindleko zomonakalo zimi malunga ne-E3 yezigidigidi, kunye nemisebenzi engama-5 000 elahlekileyo kunye nokubala. Amashishini amancinci amancinci naphakathi (ii-MSMEs) nawo awasindiswanga ngaba baphangi, nanjengokuba amashishini amancinci amalunga ne-1 000 achaphazelekayo.
Oku kuza ngexesha apho ilizwe lethu kunye nehlabathi liphela libandakanya izicwangciso ezibanzi zokuphembelela ukudalwa kwemisebenzi kunye nokukhuthaza uqoqosho lwethu kwindlela yokukhula okuzinzileyo. 3
Ubundlobongela obungazange babonwa buye babetha kanobom kwicandelo lethu lezempilo nanjengoko, phakathi kwezinye, iimoto zempilo ezintandathu, kuqukwa neenqwelo zezigulana, zonakaliswa; ezinye zazo bezintsha.
Oku kubandakanya izithuthi ezikhethekileyo ze-COVID-19 zenkqubo yokulandela umkhondo kunye nokuhambisa iisampulu ze-COVID-19 kwingingqi yaseShiselweni. IiOfisi zezeMpilo zeNhlangano zengingqi zacinywa. Enye i-ambulensi yahlaselwa kwingingqi yaseLubombo ibeka ubomi bezigulana ebhodini emngciphekweni. Oku kugqityiwe nangaphezulu kwamaziko ali-10 aseTinkhundla awonakaliswa ngabaphangi nabaqhankqalazi.
Le meko ilusizi ichaphazele impendulo yethu ye-COVID-19 ngeendlela ezininzi, kodwa sihleli sizimisele kwaye asoyiki kumzamo wethu wokubonelela ngeenkonzo zempilo kuyo yonke i-emaSwati. Asinikezeli kumnqweno wethu wokuba sibe nenkonzo efanelekileyo kwiSizwe.
Urhulumente uyavuya xa eqaphela ukuba imeko emhlabeni ibizinzile kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, njengoko imibutho yethu yezokhuseleko iqinisekisile ukuba kugcinwa uxolo nocwangco kwimimandla yomine yelizwe. Imikhosi yethu yezokhuseleko iya kuqhubeka nokuqinisekisa ukuba uluntu lukhuselekile, amashishini kunye nezinye izinto.
Sikhuthaza ke zonke iiemawwati ukuba ziqhubeke nokuqhuba uqoqosho lwethu ngokubuyela emsebenzini nokuvula onke amashishini angakhange achaphazeleke. Oku kufuneka, nangona kunjalo, kwenziwe ngokuhambelana ngokupheleleyo nemigaqo ye-COVID-19. Ixesha lokufika ekhaya lihlala ukusuka nge-6 ngokuhlwa ukuya kwi-5 kusasa kwaye iiofisi kufuneka ziqhubeke nokuvala ngo-3: 30 ngokuhlwa ukuze kuvunyelwe abasebenzi ukuba bafike ekhaya bekhuselekile ngexesha lokufika.
Okwangoku, ndinqwenela ukukhumbuza i-emaSwati ukuba sisajamelene nemeko eyoyikisayo, ye-COVID-19, eqhubekeke ingagungqi kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo. Siyaqhubeka nokufumana ukwanda kwenani lamatyala amatsha e-COVID-19 elizweni ukusuka 96 amatyala phakathi komhla we-13 ukuya kowe-19 kuJuni, 207 amatyala ngeveki ye-20-26 kaJuni, kunye 242 ngeveki ye-27 kaJuni ukuya kwi-3 kaJulayi 2021. 5
Umkhondo oqhelekileyo wamatyala amatsha ubonakalisa imeko ethe gqolo yokunyuka okuphezulu kunye novavanyo lokunyusa ukunyuka ukusuka kwi-3% ukuya kwi-9% ukusukela izolo. Kusweleke abantu abathathu abanxulumene ne-COVID-19 kwiveki ephelileyo emva kokuxela ityala elinye kwiveki edlulileyo.
Ngelixa izinga lokuhlala ebhedini kumaziko ethu okuzahlula asesezantsi i-9%, ukunyuka kwamanani luphawu olucacileyo lokuba ilizwe likwizigaba zokuqala zeliza lesithathu. Uqikelelo lubonisa ukuba kuya kubakho ukwanda okuqhubekayo kumatyala amatsha kwiiveki ezi-4 ukuya kwezi-6 ezizayo ngaphambi kokuba kufikelelwe kwincopho. Siyazi ukuba ukunyuka kwamatyala amatsha kukhokelela ekwandeni kwenani labaswelekileyo kwisithuba seeveki ezimbini.
Kwakhona, ndibongoza onke ama-emaSwati ukuba ahlale ephaphile kwaye ethobele ngokupheleleyo imiGaqo ye-COVID-19 kunye neenkqubo zempilo. Okwangoku, uRhulumente uyaqhubeka nokufumana ezinye izitofu ze-COVID-19 ze-emaSwati zokuqinisa umsebenzi wethu wokugonya.
Ngempelaveki, sifumene iidosi ezingama-12 000 ezongezelelweyo zokugonya iOxford-AstraZeneca. Ezi thamo 6
iyakusenza ukuba sikwazi ukuqhubeka nokunika idosi yesibini kubasebenzi bezempilo njengoko sisiya kumanqanaba alandelayo omsebenzi wokugonya. Icandelo loMphathiswa Wezempilo liya kunika uhlaziyo oluyimfuneko lokugonya
Njengoko sifumana ulwazi oluthe kratya malunga nokusasazeka kwe-Delta eyahlukileyo yentsholongwane ye-COVID-19 kumazwe aselumelwaneni, ngamana singalumkisa iSizwe ngamathuba andayo okuba le ntsholongwane ijikeleze elizweni ngenxa yokuhamba kwabantu besuka kwelinye ilizwe besiya kwelinye. ? Ngokuphathelene noku, sicela iSizwe ukuba siqhubeke nokulandela imigaqo ye-COVID-19 esekwe nguRhulumente njengenyathelo lokunciphisa ifuthe lobhubhane kubemi.
1. Nxiba imaski yobuso uze uvale impumlo nomlomo;
2. Hlamba izandla okanye uhlambulule rhoqo;
3. Kulumkele ukuhlangana nabantu kunye neendawo ezivalekileyo ezingenisa umoya omninzi okanye ukujikeleza komoya;
Masizigcine sikhuselekile kwi-COVID-19 kwaye sikhusele abasebenzi bethu bezempilo.
Uxolo ngoMatshi nge-10 kaJulayi 12.00PM
IZizwe eziManyeneyo eNew York #JusticeforThabani #EswatiniProtests #TiniTwitter #eswatini #Swazini #FreeSwaziland # Idemokhrasi ngoku #Kungahlwakwenile #ukulele #IdemokhrasiSwaziland #prayforeswatini #SwaziLivesMatter pic.twitter.com/XTxWe5v51z
-SwaziLivesMatter (@ swazilivesmatt1) Julayi 5, 2021
Ngaphandle kokubuyela umva okukhulu okubangelwe yinkqubo yezempilo kukhuthuzo lwakutsha nje, asizukuyeka ukunceda ii-emaSwati ziphumelele lomlo nxamnye nobhubhane. Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukufikelela ebantwini.
Ukuvulwa kwakhona kwamaziko enkonzo yezeKhaya
Kwelinye inqaku, sithanda ukuqinisekisa iSizwe ukuba onke amaZiko eeNkonzo zezeKhaya kwilizwe lonke aza kusebenza ukusukela ngomso, ngaphandle kweManzini, Hluthi, Hlatsi, naseSiphofaneni.
Ubhaliso lwenkampani kunye nokuvuselelwa kwamaphepha-mvume ezithuthi
Urhulumente uyayazi into yokuba ukuvuselelwa kwamaphepha-mvume okubhaliswa kwezithuthi kunye nokubhaliswa kweenkampani kuphazanyisiwe ngexesha lezidubedube zakutsha nje. Sazisa iSizwe ke ngoko ukuba ukuvuselelwa kwamaphepha-mvume ezithuthi kwandisiwe ukuya kumhla wama-20 kuJulayi wama-2021. Ukuhlaziywa kobhaliso lwenkampani kwandisiwe ukuya kumhla wama-31 Agasti 2021.
Urhulumente angathanda ukuqinisekisa onke ama-emaSwati, noluntu lwamanye amazwe, amahlakani wozakuzo, nabahlali base-Eswatini ukuba siza kwenza konke okufunekayo ukuqinisekisa ukhuseleko loluntu njengokuba ubomi bubuyela esiqhelweni.
Ndingangabatyhafisa abantu ekuthengeni izinto ezothusayo kwaye ndinike isiqinisekiso sokuba senza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba kukho ubonelelo olwaneleyo ezivenkileni zethu ngawo onke amaxesha.
Siyaqhubeka ukuthembela kuwo onke ama-emaSwati ukuba enze into elungileyo kwaye sikhusele ngokuqatha nakweziphi na izinto zangaphandle ezijolise ekuzinziseni ilizwe lethu kunye nokusongela imvisiswano yethu.
Sinezwe elinye kwaye kuxhomekeke kuthi sonke ukukhusela kunye nokugcina oko besisaziwa kangangeenkulungwane-kwaye luxolo nozinzo lwethu.
UTHEMBA N. MASUKU
5 Julayi 2021